ASOJ oo sheegtay in Dr Omar Iimaan Iclaamiyay dagaal ka dhana Saxaafadda.
Monday July 05, 2010 - 05:08:14 in Warar Af-Soomaali ah by Super Admin
Dalladda Isu taga Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ASOJ ayaa Gudoomiyaha Xisbul Islaam Dr Omar Iimaan Abuubakar ku eedeysay in khudbadiisii ugu dambeysay uu ku Iclaamiyay dagaal ka dhana Saxaafadda Somalia xilli Warfidiyeenadda la xanuunsanayaa xaqdaradii lagu dilay Agaasimahii HornAfrik Saciid Tahliil Ahmed,allaha u naxariistee.
"Khudbadii uu Sabtidii la soo dhaafay jeediyay Omar Iimaan ayaan si degan u dhageysanay,waxaana nasiib daraa inuu cadeeystay dagaalka uu u qabo Saxaafadda madaxabanaan,wuxuu nagu eedeyay inaan la safanahay garab,oo aanan dhex dhexaad ahayn,micnaha wuxuu yahay hala laayo Weriyeyaasha tebin waayo Colaadaheena"ayuu yiri Gudoomiyaha ASOJ Dahir Abdulle Alasow.
Dahir Alasow wuxuu sheegay inay cambaareeynayaan hadalada khalafsan ee Dr Omar Iimaan,wuxuuna ugu baaqay Saxaafadda ku baxda afka Somaliga ee madaxa banaan inay u istaagaan sidii shacabka dhibaateeysan uga xoroobi karaan kooxaha qandaraaslayaasha ee colaadaha wado,dalkana looga hergeli lahaa dowlad Qaran oo ku filnaan kareeysa rabitaanka qofkasta oo Wadaniya.
"Waxaan Saxaafadda madaxa banaan ee Somalia,Somaliland,DJibouti ka codsaneynaa inay garab istaagaan shacabka dhibaateeysan,ayna joojiyaan faafinta wararka shaqsiyaadka labo sano kadib doonayo inay bulshada colaad u ehel noqoto,waxaana sidoo kale ku baaqeeynaa in Warbaahinta iyo Weriyeyaasha isu kaashadaan sidii dalka Somalia nabad loogu dabaali lahaa si hooyooyinka iyo Caruurta loo samatabixiyo"ayuu yiri Mr Alasow.
Suni Saed Salah